bhimphoto: December 2015
गोरखाको बारपाक पुगेको टोलीका केही सदस्य साहसिक पदयात्रा रुचाउने पर्यटकलाई यहाँ पठाउन सकिने गफ दिइरहेका थिए । हुन पनि हो, २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाक पुग्न राङरूङ खोलाबाट ठाडो उकालो लाग्दा बाटो एकप्रकारको त्रास उत्पन्न गराउने खालकै भएको छ ।
उकालो छिचोल्दै गर्दा डाँडा धेरै ठाउँमा पहिरो जान ठिक्क परेजस्तो देखिन्छ । तर, आतंक बढाउने जतिसुकै खबर आउन, बारपाक पुगेपछि डर लाग्दैन । त्यो बस्ती आफैंमा अनुपम छ । डाँडाबाट हिमाल हेर्नु, जिर्णोद्धार गर्दै उभ्याउन थालिएका घरहरू हेर्नु अन्त सहजै पाइने दृश्यमध्ये पर्दैनन् । भूकम्पको घटनापछि मैले दोस्रोपटक पोखराबाट बारपाकको यात्रा गर्न पाएँ, टोली थियो पोखराका पर्यटनव्यवसायीको । त्यसो त पोखरेली पर्यटन व्यवसायी बारपाकबारे उति चासो राख्ने होइनन् । यहाँ आफ्नै खालको व्यापारकर्म छ । पदमार्ग जान इच्छ्याएर पोखरा आइपुग्ने पर्यटकलाई ट्रेकिङ एजेन्सी अन्नपूर्ण पदमार्गको फेरोमा जान हौस्याउँछ । संसारमै राम्रामध्येका परेको यो फेरोको यात्रा आफैंमा गजब छ । दिन धेरै बित्छन् । पाहुनाको जहाँ बास र विश्राम हुन्छन्, ती ठाउँको व्यापार चल्छ । त्यसैले यो परम्परागत प्याकेजबाहेक पाहुनालाई नयाँ रुट बताइदिएर जोखिम मोल्ने ट्रेकिङ एजेन्ट भेटिन गाह्रो छ ।
म यतिखेर बारपाक र अन्नपूर्ण फेरोको कुरा गर्न लागिरहेको छैन । ट्रेकिङ गाइडका अगुवा जीवन सापकोटालाई बारपाक पुग्दा सोधेको थिएँ- 'पर्यटकलाई कहिल्यै कपुचे जाउ भन्नुभएको छ -' उनले 'छैन' भने । के थाहा भयो भने यो अनौठो नामको ठाउँबारे धेरै पोखरेली गाइडलाई थाहै छैन । म त्यो यात्राबाट फिरेका हुनाले जानकारी थियो । त्यसैले सोधियो ।
पोखराको काहुखोलाबाट ३९ किमी बसयात्रापछि सिक्लेस पुगिन्छ । सिक्लेस धेरैजना घुमन्ते पुगेको हुनहुपर्छ, नपुगेपनि यो सुन्दर गुरूङ गाउँको चर्चा सुनेको हुनुपर्छ । यो गाउँबाट मच्चिएर हिड्दा ८ घण्टाको दूरिमा पर्छ कपुचे हिमताल । अन्नपूर्ण-२ हिमश्रृंखलाबाट खस्ने हिमपहिरो जहाँ मुन्तिर आएर पानीमा परिणत हुन्छ, बस्छ, अनि भरिएर खोलाहुँदै बग्छ, यही ठाउँ कपुचे हो । निकै जोखिमपूर्ण छन् पुग्ने बाटा । त्यसैले यो ठाउँ दूरिले पोखराबाट नजिक भएपनि प्रचार पाउनबाट बञ्चित छ । अब यो क्षेत्रको थोरै आफ्नै यात्राको कुरा गरौं ।
कफु खोला र खरिया धाराले टापुजस्तो तेर्सो बनाएको हुगु पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो । हिउँ खसेजस्तो चिसो सिमसिम वर्षा थामिएको थिएन । ज्यान ओताउन मैले भरिया दाईको प्लाष्टिक पाएको थिएँ । दुइटा गोठ । छानोबाट धुआँ आइरहेको देख्ता कतिखेर पुगेर भूइँमा डङरंङ लड्नुजस्तो भएको थियो ।
तरेर जाने ठाउँ अलि पर देखियो । पहिरो खसेका बडेमानका ढुंगा छिचोल्दै अघि बढ्दा कफु खोलामा काठको मुडा देखियो । गोठबाट केही मान्छे हामीलाई हेरिरहेका थिए । कालो भोटेकुकुर नौलो देखेर भुकिरहेको थियो । बल्लतल्ल ज्यान अड्याउने ठाउँ हुगुको गोठ पुगियो । अगेना छेउमा बसेर जुका फालियो । तिनले चुसेर बनाएका घाउ गन्ती गरियो । दुवै गोडामा गरेर ७ ठाउँ चुसेछन् । जुका झार्न बोकेको नुनको पोको ज्याकेटको खल्तीमा पानीले भिजेको थियो । जुकाले चुसेका ठाउँ साह्रै चिलाउँछ । दाया“ गोडाको एउटा घाउबाट बगेको रगत थामिन निकैबेर लाग्यो । केहीबेरमा केही लडेजस्तो ठूलो आवाज आयो । हामी ओत लागेको गोठका आँगनमा हिउँ फुटाएर छरेजस्तो सेतो भयो । साथीहरूले भने 'कपुचेमा हिमपहिरो गएछ । यो त्यही छर्को आइपुगेको हो ।'
हामी सिक्लेसबाट पूर्व पहरै-पहरा बिहान १० बजे हिडेका थियौं । छपक्क मिलेका ढुंगाका छाना भएका घर । बस्ती मास्तिर अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला भएको सिक्लेसमा पहिलो यात्रामा पुग्नेका लागि आतिथ्य आनन्दको लाग्छ । अलि पर्तिर, छेउछाउ घुम्न जाउँ भन्ने नलाग्न सक्छ । पोखराबाट साँझ आइपुग्दा मलाई पनि त्यस्तै लागेको हो । तर, हामी मुलुककै होचो ठाउँमा अवस्थित हिमताल हेर्नै भनेर निस्केका थियौं । अतः जान्न भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।
लगातार हिड्दा पनि ७ घण्टा लाग्ने सुनेपछि पुगेर मेरो हौसला अलि घटेको थियो । सकिँदैन होलाजस्तो लागेर साथीहरूलाई 'तपाईहरू जानुस् । म बरु सिक्लेसमै पर्खन्छु' भनेर टार्न खोजेँ । यसका कारण थिए । पहाडी यात्रामा हलुका ब्याग, दरिलो लठ्ठी, सजिला स्पोर्टस् जुत्ता र छाता वा रेनकोट हुनैपर्छ । यीमध्ये मसँग भएका कुरा केही थिए भने लगाएका जुत्ता । तै साथीले छाड्ने भएनन् । हार्न मिलेन । उकालो-तेर्सो भीरैभीर र खोलाको बाटो हिँडियो ।
सिक्लेसका चिबा (मुखिया) का मनबहादुर गुरूङका दाजु भीमबहादुरको घरमा खानाको प्रबन्ध थियो । हिड्नेबेला भाउजुले हरियो कपडाका टुक्रामा गा“ठो पारेका स-साना पोका दिइन । 'यो राख्नु । नुन हो । जुका लाग्छन् । दल्न काम लाग्छ', उनले भनिन् । चिबाका दाजुले पनि सम्झाए 'बाटो सजिलो त छैन । तर, नआत्तिकन जानु । पुगिन्छ ।' चिबा हाम्रा गाइडमात्रै थिएनन्, उनी आफैं पनि हाम्रा साथको यात्राबाट कपुचेको अहिलेको अवस्था हेर्न चाहन्थे । डा. हुमबहादुर गुरूङको जोडबलले हाम्रो यात्रा अचानक तय भएको थियो । पर्यावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि भिजेका डा. गुरूङ केहीअघि नेपाल पंछी संरक्षण संघका अध्यक्ष थिए । अहिले आफ्नै संस्था बनाएर काम गरिरहेका छन् । राजधानी बसेपनि आफ्नो पुरानो थलोमा संरक्षणको काममा उनलाई चासो रहेको गफगाफमा बुझियो ।
जल तथा मौसम बिज्ञान विभागका अनुसार मुलुकका अधिकांश हिमतालहरू समुद्र सतहको चार हजार मिटरमाथि छन् । यात्राबाट फिरेपछि मैले विभागका निर्देशक ऋषिराम शर्मालाई फोन गरेको थिएँ । उनले कपुचे २ हजार ४ सय ३७ मिटरमा छ भन्दा अचम्म मानेका थिए । 'हामीले अध्ययन र रेकर्ड गर्ने सबैको होइन । जहाँ कालान्तरमा जोखिम भन्ने अध्ययन हुन्छ, त्यसैको गर्छौं, उनले भनेका थिए, 'कपुचे अध्ययन गरिनु जरुरी छ । यो पर्यटकीय सम्भावनाको हो भन्ने अनुमान गर्छु'
हुगुमा दुइ दसकअघि १२ वटा गोठ रहेछन् । अहिले एउटामात्रै छ । मह-सिकारी मेजा गुरूङको गोठ । मेजाका छोरा प्रकाश बाटो देखाउँदै सिक्लेसबाट हाम्रा साथै गएका थिए । गोठमा मुली भेटिएनन् । भेटिए प्रकाशकी आमा नौमाया, काठमाडौंबाट आएका ९ वर्षे भाञ्जा र गोठाला बसेका माइला भनिने मानबहादुर तामाङ ।
मेजाको सिकार कथा सुन्नका लागि थुप्रै थिए । केही वृत्तचित्रमा पनि आएको सुन्न मिल्यो । हुगुको गोठहरू नयाँ पुस्ता सेनामा भर्ती जाने चलनले विस्तारै उठेका थिए । पुराना पुस्ताले गोठको भरको आम्दानीले सन्तान हुर्काएका थिए । नयाँ पुस्ता गोठ स्याहारेर बसेनन्, बरु अभिभावकलाई पनि सिक्लेस र पोखरामा घर बनाएर गोठ छाड्न बाध्य पारे । हेर्दा-सुन्दा रमाइलो लागेपनि मान्छेका बस्तीभन्दा टाढा गोठको बसाइँ सुखको होइन ।
मेजाका तीन भाइ छोरामा पनि एउटा हङकङ, अर्का आयरल्याण्ड रहेछन् । जेठा छोरा प्रकाश १४ वर्षसाउदी अरबमा काम गरेर फिरेका थिए । अब उनी आमालाई सघाइरहेका थिए । बजार पुगेर चाहिने सामान गोठ ल्याउने । गोठबाट घिउ, तरकारी बजार लैजाने । 'मैले पटकपटक गरेर साउदीको गर्मिमा १४ वर्ष बिताएँ', प्रकाशले भने, 'अब चाहि जान्न । यतै बस्छु । गरेदेखि यतै पेटपालो हुन्छ ।'
नौमायाले छाड्न नसकेकै कारण मेजाको गोठ थामिएको थियो । हामी पुगेका बेला मेजा पोखरामा बन्दै गरेको घर कुरिरहेका छन् भन्ने सुनियो । गोठमा डेढ दर्जन भैसी र १४० बाख्रा पालिएका थिए । हुगुमा स्याउ हुने रहेछ । हामी पुग्दा केही पुराना गोठका संरचनासँगैका स्याउका बोटमा फूल लागेका थिए । कपुचे यात्रामा जानेका लागि हुगुको गोठ नै एकमात्र विश्रामको थलो हो । यहाँ नबसे ७/८ घण्टा वरपरको बाटोमा कतै बास छैन । हामीले पुगेको रात पाहुनाका लागि भात र ढिँडो रुचिअनुसारको भोजन व्यवस्था भयो । गोठमा आगो बालेर स्लीपिङ ब्यागभित्र ज्यान लुकायौं ।
विहानै चिया सुरुप्प पारेपछि अब थियो मात्र २ घण्टाको बाटो । पहाडका बाटाहरूमा सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरो के हो भने हिडिरहेकाहरूका लागि १ घण्टा भनिन्छ । अभ्यस्त नभएकाहरूलाई त्यही बाटो तीन घण्टा लाग्यो भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
२ हजार २५ मिटर उचाइको हुगुबाट दक्षिण-दक्षिण लेकाली जंगल छिचोलेर कपुचे पुगिने रहेछ । धेरै ठाउँ ठू-ठूला रुख लडेका थिए । गाडी आउजाउ हुने ठाउँका नजिक हुँदो हो भने ती सुकेका रुखका पात पनि बढारेर बोरामा कोचेर काम लाग्छ भनेर लैजानेहरू हुन्थे । बडेमानका सुकेका रुख झन कहाँ यसरी रहन पाउनु ! यहाँ भने रुखहरूमा लेउ पलाएका थिए ।
अघि बढ्दै गएपछि रुखहरूमा हिउँ अडिएको देखिए । भुइँभरि पनि छपक्क सेतो थियो । हामी पुगेको डिल २५ सय ४६ मिटर उचाइको रहेछ । यहाँबाट मुन्तिर तालकै सतहको उचाइ २ हजार ४ सय ३७ मिटर । डिलबाट मुन्तिर झर्न सजिलो बाटो थिएन । यहाँ मान्छे नआउने भएकाले कतै गोरेटा रहेनछन् । हिड्न ठाउँ बनाइएको थिएन । माथि हिमालबाट बेला बेला हिउँका डल्ला लड्दै तालमा छप्ल्याङ्ङ-छप्ल्याङ्ङ गर्थे । घाम लागेको थियो । हावा चिसो थियो ।
ताल हेर्दा मदिराको गिलासमा आइसका टुक्रा तैरिएको सम्झाउने । तर, यहाँ गिलास थिएन । तमतन्न नीलो पानी भएको ताल । तैरिएका हिउँ । हामीले अघिल्लो दिनको कष्टपूर्ण हिँडाइको थकान सबै यहाँ बिर्सियौं । यात्रा थाल्दा यतिको उचाइका हिमताल देख्न पाइएला भन्ने पत्यार लागेकै थिएन । तर, यहाँ हाम्रा अघि ताल थियो ।
'यो ताल पहिले सानो आकारको थियो', डा. हुम गुरूङले सुनाए, '१० वर्षता आकार बढ्दै आएको हो ।' यहाँसम्म आइपुग्ने पदमार्ग बनाउन सकेमात्रै पनि साहसिक पदयात्रा रुचाउनेहरूलाई पोखरानजिकै अनौठो गन्तव्य हुने उनले बताए । सिक्लेस पार्चे गाविसमा पर्छ । यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एक्यापअर्न्तर्गतको संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको एरिया हो । वनजंगल छिचोलेर पुगिने यो ताल मादी नदिको मुल भएको स्थानीय संरक्षण समिति अध्यक्ष मनबहादुर गुरूङले बताए । हामीसँगै रहेका मनबहादुरले निकैबेर वरपर घुमेर बाटो बनाउन सकिने ठाउँ खोजिरहे । 'वर्षको दुइपल्टजस्तो म यहाँ आउँछु', उनले भने, 'यहाँ आउनलाई बाटो थोरैमात्रै सजिलो बनाउन सकियो भने सिक्लेस आएकाहरूलाई कपुचे घुम्न जाउ भन्न सकिन्थ्यो ।' एक घण्टा हाराहारी समय ताल आसपासमा बिताएपछि हामी फेरि हुगु फर्कियौं । त्यो दिनको रात हुगुमै बित्यो । पाहा हन्टिङ र सिस्नुको फाँडोले माइला दाइले आतिथ्य गरे ।
धादिङको सेरदुङबाट २२ वर्षअघि सिक्लेस आएका माइलाको कथा बेग्लै थियो । उनी फेरि धादिङ गएनन् । 'गुरूङ भाषा बुझछु, अलिअलि आउँछ पनि', उनले रमाइलो पारामा भने, 'नेपाली जस्तो पटट बोल्न जान्दैन ।' निर्माण मजदुर भएर लमजुङका साथीसँगै आएका माइला मेजाको अनुरोधमा गोठमा चार वर्षदेखि अडिएका रहेछन् । जेठ र असार यार्सागुम्बा टिप्न जाने, अरुबेला गोठका बाख्रा चराउने दैनिकी ।
'मेरो बानी राम्रो छैन । अम्मल धेरै छन्', उनले भने, 'पैसा नहुने होइन हुन्छ । चुरोट पिउन परो, रक्सी खान परो । सक्किइ जान्छ ।' उनलाई आफ्नो दिनचर्यामा कुनै पछुतो रहेको कुराकानीले बुझाएन । हँसिला, ठट्यौला ।
हुगुबाट सिक्लेस फिरेपछि थाहा भयो कपुचेको अध्ययन केहीअघि एकजना जापानी प्राध्यापकले गरेर गए । होटल नमस्तेका सञ्चालक धन गुरूङका अनुसार गत फागुन दोस्रो साता तेक्यो हेसे विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्भाइरोन्मेन्टल इन्फर्मेशनका सहायक-प्राध्यापक जिरो कोमोरीले तालमा करीब २ घण्टा बिताए । अघिल्लोपल्ट ५ महिनाअघि आउँदा उनी मादी तर्न नसकेर तालमा पुग्न सकेका थिएनन् । पछिल्लोपल्ट पट्याएर बोक्न मिल्ने डुंगा लिएर आएका थिए ।
'डुंगा लिएर तालमा घुम्यो', गुरूङले भने, 'नापजोख पनि गर्‍यो ।' कोमोरीलाई त्यहाँ पुर्‍याउन गाउँबाट आफूसहित तीनजना गएका उनले सुनाए । कोमोरीले ताल ४० मिटर गहिरो, ४ सय मिटर लम्बाइ र ३ सय मिटर चौडाइको निकालेको हिसाब आफूले पनि टिपेर राखेको उनले देखाए । 'जाँदा डुंगा मलाइ छाडेर गएको छ', उनले भने ।
गुरूङ भाषामा कपूचेको अर्थ 'हिउँ भत्केर खस्ने समथर भाग' भन्ने बुझिने रहेछ । पोखरा फिरेपछि कहिलेकाही ट्रेकिङ गाइड भेट हुन्छन् । म सोध्छु -'कपुचे जानु भएको छ ?' गएको छु भन्ने उत्तर मैले पाएको छैन । भूकम्पपछि यो ताल र जाने बाटोको अवस्थाबारे सिक्लेसवासीसँग बेलाबेला कुरा हुन्छ । बाटो उस्तै छ । भत्के-बिग्रेको छैन तर, सजिलो पनि छैन ।
(२०७२ पुस ११ को कान्तिपुर, कोसेलीमा प्रकाशित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:44 AM No comments:
content catagory जैविक विविधता, यात्रा संस्मरण